‘चङ्गा चेट’का हेर्ने पनि ‘छक्का पञ्जा’ कै दर्शक हुन्
२०७५ कार्तिक १२ सोमबार १३:५९:००
पछिल्लो दशक नेपाली रजतपटमा केही नयाँ चलचित्र निर्माणको क्रम शुरु भयो । जसले केही आशाका किरण सञ्चार गरे । दशकौंदेखि चल्दै आएको मूलधारभन्दा बाहिर निस्किएर निर्माण गरिएका चलचित्रमध्ये केहीले मौलिक कथामात्रै भनेनन्, दर्शकको मन पनि जिते र समीक्षा पनि राम्रो पाए । यस्ता चलचित्रले निर्देशकको करिअर उज्यालो बनायो नै, समग्र नेपाली चलचित्र उद्योगमा सम्भावनाको ज्योती पनि सञ्चार गरे । दशकौं नेपाली चलचित्र निर्माण तथा निर्देशनमा एकछत्र राज गरेका चलचित्रकर्मी भन्दा पनि पछिल्लो समय नयाँ प्रयोग गर्न रुचाउने निर्देशकहरु भित्रिन थाले । तिनै निर्देशकले अहिले नेपाली चलचित्रको प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् । यस्तै निर्देशकमध्येका एक हुन्, दीपेन्द्र के खनाल । खनाल नेपाली चलचित्र उद्योगमा नयाँनयाँ टे«न्डको सूत्रपात गर्ने निर्देशकमध्येका एक हुन् । एउटा जानरालाई उठाउने र अर्को चलचित्रमा अर्कै जानरामा हात हाल्ने उनको विशेषता हो । ‘पशुपतिप्रसाद’, ‘चपली हाइट’, ‘झोले’जस्ता चलचित्र निर्माण गरेर दर्शकलाई फरक टेस्ट बाँड्दै आफ्नो भिन्न पहिचान बनाउन सफल खनाल निर्देशित चलचित्र ‘चङ्गा चेट’ अहिले रिलिजको तयारीमा छ । प्रस्तुत छ, ‘चङ्गा चेट’ सँगै नेपाली रजतपटका विषयमा केन्द्रित रहेर बाह्रखरीका नरेश फुयाँलले निर्देशक खनालसँग गरेको कुराकानीः
‘चङ्गा चेट’ कस्तो चलचित्र हो ?
‘चङ्गा चेट’ कमेडी बेसको चलचित्र हो । हाम्रो अहिलेको समाजको समस्या यो चलचित्रको कथा हो । युवा बेरोजगार, शिक्षा, घरखेतीको समस्या जोडिँदै जाँदा बेरोजगार युवा कहाँ बस्दै जान्छन्, कथाले समेट्छ । यो कथालाई कमिक वेबाट भन्ने प्रयास गरिएको छ ।
गोजीमा दाम हुनेहरुको चलखेल र गोजीमा दाम नहुनेहरुको संघर्ष नै चलचित्रको मुख्य कथा हो । यसलाई हाँस्य तरिकाले भनिएको छ ।
धेरै जानरा नेपाली चलचित्रमा भित्र्याउने तपाईं यो पटक कमेडीमै फर्किनुभयो । कारण केही छ कि यस्तै चलचित्र चलिरहेका छन् भनेर हो ?
मैले जहिले पनि फरक नै गर्न खोजिरहेको हुन्छु । बीचमा ‘पशुपतिप्रसाद’, ‘धनपति’ जस्तो चलचित्र पनि बनाएँ । अहिले कमेडी चलचित्र बनाइरहेको छु । समसामयिक कथा हो तर यसलाई कमिक तरिकाले काम गरौं जस्तो लाग्यो । पहिला आफैले पनि बनाएँ तर फर्किँदै फर्किन । त्यसैले एकपटक बनाउँ न भनेर ‘चङ्गा चेट’ निर्माण गरेको हुँ ।
अहिले कमेडी बेसका चलचित्र चलिरहेका छन् भनेर धेरैले यही जानरामा रहेर निर्माण गरे पनि अधिकांश चलचित्रले घाटा बेहोरिरहेका छन् । तपाईंको चलचित्र चाहिँ चल्छ भन्ने आधार के छ ?
कमेडी चलचित्र बनाउने भन्दैमा जवरजस्ती बनाएर हुँदैन । कथा एकारितर छ तर यहाँ र त्यहाँनेर हँसाउने भनेर जबरजस्ती हँसाउन खोजेर दर्शकले मन पराउँदैनन् । मुख्य त कथा र त्यसको स्क्रिनप्लेले छुनुपर्छ । हाँस्ने त पछिको कुरा हो । कथामै कमेडी नभई कमेडी चलचित्र बनाउँछु भनेर भनियो भने त्यो कहिले पनि सफल हुँदैन । यो कुरा बुझेर हाम्रो चलचित्रको स्क्रिनप्ले नै त्यस्तो छ कि यहाँ हाँस्ने भनेर होइन, यो ठाउँमा कसरी हाँसियो भनेर दर्शकलाई थाहै हुँदैन । कथाभित्र कमेडी हुनु र कथाभित्र कमेडी हालिनु फरक कुरा हो । ‘छक्का पञ्जा’ को कुरा गर्ने हो भने कथाभित्र कमेडी छ, त्यसैले दर्शक हाँस्नुहुन्छ । जवरजस्ती कमेडी लाद्न खोजेर त हुँदैन ।
जबरजस्ती मुख बिगारेर हँसाउन खोज्नु हाम्रा चलचित्रको समस्या हो, त्यसो भए ?
डार्क कमेडी भनेको कथाले हँसाउने हो । पात्रको यात्राको आरोह अवरोहमा घटेका घटनाले हँसाउने । तर नियत नै हँसाउने राखेर डाइलग राखे जवरजस्ती हँसाउन खोजिन्छ भने त्यो डार्क कमेडी नै होइन ।
हामी हाम्रो कथामा ढुक्क छौं, हामीले उठान गरेको कथा र प्रस्तुतिलाई दर्शकले विश्वास गर्नुहुन्छ, भरपुर मनोरञ्जन लिनुहुन्छ ।
चलचित्र ‘पशुपतिप्रसाद’ले तपाईंलाई ठूलो ‘हाइप’ दियो, त्यसयताका चलचित्रको मिश्रित समीक्षा आयो । यो चलचित्रले तपाईंलाई ‘पशुपतिप्रसाद’ कै हाइप दिनसक्ला ?
म सधैँ फरक फरक जनारामा रहेर चलचित्र निर्माण गर्दै आएको छु । त्यसैले मेरो एउटा चलचित्रसँग अर्को चलचित्र दाँज्न मिल्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । एउटै जानरामा रहेर दुईटा चलचित्र बनाइयो भने पहिलोको तुलनामा दोस्रो चलचित्र किन राम्रो बन्न सकेनभन्ने प्रश्न चिन्ह उठ्छ । तर म जहिले पनि नयाँ जानरामा काम गर्छुभने म आफै त्यसका लागि नयाँ हुन्छु । त्यसैले ‘पशुपतिप्रसाद’सँग यो चलचित्र दाँज्नै मिल्दैन । चलचित्र कस्तो बनाउन खोजिएको छ र त्यसमा निर्देशकको इमान्दारिता देखिएको छ कि छैन भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । ‘चङ्गा चेट’को सवालमा कुरा गर्दा मनोरञ्जनात्मक चलचित्र हो । यसमा फाइट छ, रोनाधोना छ, गीत छ, समग्रमा व्यावसायिक चलचित्र हो यो ।
फरकफरक जानराका चलचित्र निर्माण भएको अवस्थामा त एउटासँग अर्को चलचित्र दाँज्न त नमिल्ला तर सफलता र असफलताको तुलना गर्न सकिन्छ होला नि !
यसमा दुईटा कुरा हुन्छ, निर्देशकको निर्देशनको पाटो कमजोर भयो कि कथाकारको कथाको पाटो कमजोर भयो भन्ने कुरा यसमा जोडिएर आउँछ । कहिलेकाहिँ चलचित्र राम्रो बनेको छ भने पनि दर्शकलाई त्यसको कथाका कारण चलचित्र राम्रो नलाग्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा निर्देशकको कमजोरी भन्न मिल्दैन । निर्देशनको पाटो कमजोर हो कि कथा ? अर्थात् अन्य कुनै पक्षमा समस्या छ भन्ने कुरालाई बिर्सिनु हुन्न । एउटा कुनै निर्देशक अथवा कलाकारको कुनै एउटा चलचित्र बजारमा चलेन भनेर ऊ नराम्रो निर्देशक अथवा नराम्रो कलाकार भनेर मूल्यांकन गरिनु हुँदैन । चलचित्र आर्ट हो । यसमा २०–१९ हुनसक्छ ।
चलचित्र रिलिजको पूर्वसन्ध्यामा ‘चङ्गा चेट’का कलाकार त पब्लिसिटीमा छैनन् । कलाकारको यो प्रवृत्तिलाई कसरी हेर्ने र यसले बक्सअफिसमा कस्तो असर गर्छ ?
कलाकारलाई दर्शकले प्रत्यक्ष रिलेट गर्नुहुन्छ । हामी निर्देशक र निर्माता भनेको त पर्दा पछाडिका मान्छे हौं । कलाकार हुनु र नहुनुमा हल र बक्स अफिसमा पक्कै पनि प्रभाव पर्छ । कुरा रह्यो कलाकारले समय दिनु र नदिनुको, यो कलाकार आफैंले मनन् गर्ने कुरा हो । चलचित्र चल्यो भने सबैभन्दा पहिला चिनिने र त्यसले करिअरमा फाइदा पुग्ने कलाकारलाई नै हो । उनीहरुकै हाइप बढ्ने हो । त्यसैले कलाकारले सबैभन्दा धेरै चलचित्रबाट फाइदा म आफैलाई हुन्छ र लिनुपर्छ भन्ने उहाँहरु आफैले सोच्ने कुरा हो ।
कलाकारले आफ्नै चलचित्रको पब्लिसिटीका लागि समय नदिनुको कारण के हुनसक्छ ?
यहाँ सबैलाई चटारो र हतारो छ । केहीमा पनि म यसलाई धैर्य गरेर पर्खिएर यसलाई गन्तव्यसम्म पुर्याएर मात्रै अर्को काम शुरु गर्छु भन्ने धैर्यता छैन । यो कुरा सबैले सोच्नु जरुरी छ ।
कलाकारलाई उचित पारिश्रमिक नदिनु पनि यसको मुख्य कारण हो कि ?
धेरै समय दिनै पर्दैन । चलचित्र रिलिजको समयको ७ दिन मात्रै दिए पुग्छ । रिलिजको ७ दिन अरु सबै काम छोडेर यो मेरो चलचित्र हो र यसका लागि मैले समय दिनुपर्छ भनेर समय छुट्याइदिए हुन्छ । ७ दिन भनेको धेरै समय होइन । एक महिना दुई महिना पनि होइन । धेरैले भोग्दै आएको समस्या हो यो ।
‘छक्का पञ्जा’ र ‘जय भोले’ अहिले पनि हलबाट उत्रिएका छैनन् । दर्शकको बाक्लै उपस्थिति यी दुई चलचित्रमा रहिरहेका बेला यसको असर ‘चङ्गा चेट’लाई पर्ला कि नपर्ला ?
‘छक्का पञ्जा’ हेरिसकेका दर्शक नै हाम्रो चलचित्रका दर्शक हुन् । उहाँहरु नै हो हाम्रो चलचित्र हेर्न आउने दर्शक । जानरा एउटै हो ‘छक्का पञ्जा’ र हाम्रो । तर उहाँहरुको कथा गाउँको स्कुलको हो तर हाम्रो कथा युवाको समस्या हो । सेटिङ फरक र कलाकार पनि फरक छन् । कलाकार नदोहोरिउन् भनेर मैले यसमा शुरुमै ध्यान दिएको छु ।